Sidee ayay u muuqan kartaa shaxda safka hore ee ay Kooxda Chelsea caawa ku wajahayso Man United oo marti u ah? – Gool FM
(London) 17 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa eegeysa inay sii dheereysato dhibacaheeda kaalinta afaraad ee Premier League, marka ay caawa soo dhoweynayaan naadiga Manchester United.
The Blues ayaa haatan fadhisa kaalinta afaraad iyadoo leh 41-dhibcood, waxaana ay lix dhibcood oo nadiif ah ka sarreysaa kooxda ay caawa la ciyaarayso ee Man United oo fadhisa kaalinta sagaalaad, inkastoo kooxda Chelsea ay Man Utd kala kulantay labo guuldarro xilli ciyaareedkan.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Frank Lampard ayaa kaliya hal kulan guuldarro la kulantay siddeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay tartammada oo dhan, laakiin waxa ay guuleysteen hal kulan oo qura shantoodii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka, iyagoo barbaro la galay labadii kulan ee ugu dambeeyey Premier League kooxaha Arsenal iyo Leicester City.
Chelsea waxaa kulankan dhaawacyo kaga maqnaanaya Ruben Loftus-Cheek (muruqa dambe ee luga), Christian Pulisic (Gumaarka) iyo Marco van Ginkel (jilibka), halka Tammy Abraham oo dhaawac canqowga ah qaba shaki laga galinayo ciyaarta caawa.
Haddaba shabakadda Sports Mole ayaa shaacisay shaxda ay kooxda ka dhisan caasimadda Ingiriisku caawa kala hortagi karto Man United kulanka ka dhacaya garoonka Stamford Bridge.